I-Ellicott Dredges Yokubuyiselwa KweMarsh & Wetland, Ukuvikelwa Kogu
Ukugcinwa kwamaxhaphozi, ama-shorel kanye namachibi angabaluleka ekulondolozweni kwalezi zindawo ezivundile ngokwemvelo. Ukwehliswa kabusha kwemvelo kususa inhlabathi eyakhiwe neyonakele emizileni yamanzi evumela ukugeleza kwamanzi angenasawoti ukuletha izakhamzimba nokukhipha imfucuza.
Ukuthuthuka kwemvelo okutholakala ngokudonswa phansi kungathinta impilo yabantu kanye nezilwane nezitshalo endaweni ezungezile. Ukwehliswa kwemvelo kwesinye isikhathi kudinga ukunemba okusezingeni eliphakeme ukuqinisekisa izinhloso zephrojekthi ngenkathi kugcinwa indawo ephephile.
Uchungechunge lwe-Ellicott I-370HP Dragon® dredge kanye nochungechunge I-670 Dragon® dredge ama-cutterhead suction dredges asebenza kahle kumaphrojekthi amancane futhi avulekile avulekile .. I-Ellicott Series 3I-60SL Swinging Dragon® dredge futhi Uchungechunge I-460SLM Swinging Dragon® dredge ama-swinging ladder dredges asebenza kahle ezindaweni eziwumngcingo nalapho kudingeka khona ukunemba okuqondile. Onke lawa amamodeli akhelwe kuzingxenyekazi eziqhamuka kancane ezenza ukuthi zilungele iningi lamaphrojekthi wokubuyiselwa kwamaxhaphozi namaphrojekthi okulungisa imvelo.
Uchungechunge lwe-360SL Dragon® Dredge
Ukubuyiselwa KweMarsh And Wetland
Amaphrojekthi wokubuyiselwa kweMarsh kanye neWetland ayinzuzo ekuzijabuliseni kwasendaweni nasezindaweni zemvelo zezilwane zasendle. Ukugeleza okungokwemvelo kwezinto ezibonakalayo kanye nezikhukhula zonyaka ezithile kuvimbela imigudu enikeza amanzi ahlanzekile ezindaweni ezingamaxhaphozi ezisemaphandleni noma emachibini. Ukudonsa lezi ziteshi kuvumela amanzi ukuthi agijime angene futhi aphume endaweni engena maphakathi nezwe, alethe izakhamzimba futhi akhiphe imfucuza.
Imishini yethu yokwakha amanzi isetshenziselwa izinhlobo ezahlukene zezicelo zamaxhaphozi kufaka phakathi ukubuyiselwa kwamaxhaphozi, ukufakwa ngaphansi komhlaba okungaxhunyiwe ekwakhiweni kwamaxhaphozi, ukususwa kwezimila kanye nokususwa kwezinto ezinobuthi okunikeza izakhi emhlabathini omanzi. Ama-Ellicott® Swinging Ladder Series dredges alungele amaphrojekthi wokubuyiselwa kwamaxhaphozi futhi ahlinzeke osonkontileka nezinhlaka zikahulumeni ongakhetha kukho ongakhetha kuzo lapho behlangabezana nezindawo ezinamanzi anamaxhaphozi adinga ukushiswa.
Funda kabanzi mayelana neWetland neMarsh Ukubuyiselwa
Ukuvikelwa kogu kungavimbela izikhukhula kanye nokuguguleka komhlaba. Lolu hlobo lokuvikelwa luvame ukuqukethe amabhishi anempilo kanye nemigwaqo yokwakha, yomibili le micimbi idinga ukululama futhi ihanjiswe nesihlabathi esikhulu. Umthelela wokukhuphuka kwamazinga olwandle emhlabeni kukhuphulile ukuqwashisa ngokuthi izindawo ezisogwini zithinta kangakanani imvelo yomama.
Izimo zezulu ezingalindelekile ngokuqhubekayo ziye zaba nomthelela omkhulu ezifundeni ezisengcupheni yokuguguleka kanye nezikhukhula. Lezi zimo ziholele ekutheni kube nomuzwa wokuphuthuma wokwakha izindawo ezingasogwini ezithuthukisiwe ezinamaphrojekthi amakhulu afana neFuller Street Beach e-Edgartown, eMassachusetts (USA).
Ukugcwaliswa ngokungaguquguquki kwamabhishi nokwenziwa ngcono kwezindawo ezisogwini kuya ngokuya kuba yisiko emhlabeni jikelele. Yonke le misebenzi yenziwe yenziwa ngamasu okudonsela phansi enzelwe ukuvikela ingqalasizinda nabantu engcupheni yokwenyuka kwamazinga olwandle nezikhukhula. I-Ellicott Dredges inezinhlobo eziningana zama-dredges aklanyelwe ngqo amaphrojekthi ahlobene nokuvikelwa kogu.
I-Enbridge igoqa i-Kalamazoo River yokuhlanza i-oil oil
Ungayikhipha Kanjani Inkomo
ISouthwind Dredging Umfula omncane
I-Ellicott® Brand Dredge Ihola iGulf yaseMexico Marsh Ukubuyiselwa Kwe-BP Spill Revenue eLouisiana
Izixhobo Ezakhiwe Zomhlaba Ezigcwalisiwe ZaseGeotextile Tubes iSan Antonio River Containment Island